Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fifidianana Trinidad sy Tobago: Ny tsy fisian'ny mpanara-maso
Manoloana ny fifidianana any Trinidad sy Tobago izay hitranga afaka andro vitsivitsy dia te-hizara ny hevitro aho.
Tatitra fohy momba ny fivoriana ampahibemaso ICDN ZOOM ny alahady alina (2/8/20) momba ny lohahevitra -
"Ny tsy fisian'ny mpanara-maso ny fifidianana amin'ny 10 aogositrath fifidianana tany Trinidad sy Tobago:
Azo atokisana ve ny vaomiera misahana ny fifidianana sy ny fetra (EBC)? ”
Ireo mpandahateny dia RALPH MARAJ, DR INDIRA RAMPERSAD ary PROFESSOR SELWYN CUDJOE miaraka amin'i DR BAYTORAM RAMHARACK hisolo ny RAVI DEV ho mpiresaka.
Nilaza i MARAJ fa manahy momba ny tsy fisian'ny mpanara-maso vahiny izy, indrindra ny iraky ny Commonwealth. Nanampy izy hoe: "Na dia manana fomban-drazana amin'ny fifidianana malalaka sy madio aza isika, dia tsy misy antoka hitohizany. Tokony hiambina hatrany isika. … Nolazaina taminay fa ny praiminisitra dia nahazo taratasy avy amin'ny Commonwealth milaza fa tsy zakan'izy ireo ny mandefa iraka ao anatin'ny fandaharam-potoananay. Saingy rehefa nangatahana hampiseho tamin'ny firenena ny taratasy izy, dia namaly i Rowley hoe: 'Tsy mampiseho olona aho. Lazaiko aminao ny vahoaka, ary fantatro fa hanaiky izany ianao amin'ny praiminisitra izay milaza aminao ny marina hatrany. ' Nitombo ny tsy fahasahiranana amin'ny olom-pirenena maro rehefa manakaiky ny andro fandatsaham-bato. ”
DR RAMPERSAD dia nanasongadina ny anjara andraikitra sy ny maha-zava-dehibe ny mpanara-maso vahiny manoloana ny traikefa manan-tantara, ny fifidianana natao tany Guyana farany teo, ny ahiahy momba ny Tatitry ny Misiona Observer teo aloha ary ny vinavina fa ady akaiky ny valiny. Notanisainy ny didim-pitsarana navoakan'ny Fitsarana Dean Armorer tao amin'ny fanangonan-tsonia nataon'ny mpanohitra UNC momba ny EBC. Nanapa-kevitra ny mpitsara: "Araka izany, fahitako ary mihevitra aho fa ny fanitarana ny fandatsaham-bato amin'ny 7th Tsy ara-dalàna ny septambra 2015, ary ny manamboninahitra tamin'ny fifidianana izay tsy nikatona tamin'ny 6 hariva dia nanitsakitsaka ny andininy faha-27 (1) amin'ny lalàm-pifidianana. ”
PROFESSOR CUDJOE dia nifanaraka tamin'ny mpandahateny rehetra fa zava-dehibe ny mpanara-maso amin'ny fanaraha-maso ny fizotry ny fifidianana, saingy tsy hitany hoe ilaina izany. Nohamafisiny fa ny firenena mandroso toa ny USA, Canada ary UK dia tsy manana mpanara-maso ny fifidianana. Nilaza izy fa ao anatin'ny lova navoakan'ny mpanjanaka izay tokony hanasana ny fotsy hoditra hanara-maso ny fomba fifidianana ataon'ny mainty hoditra: "Fotoana hitokonana ho an'ny fahalalahantsika manokana." Nisy mpikambana iray tamin'ny mpanatrika nanasongadina fa saika mainty avokoa ny mpanara-maso ny CARICOM.
DR. RAMHARACK dia nandinika ny anjara asan'ny misiona maro iraisam-pirenena sy eo an-toerana amin'ny fandinihana ny 2 martsand Fifidianana 2020 tany Guyana. Nomarihiny fa ireo mpandahateny telo teo aloha dia tsy mankahala ny fananana mpanara-maso ny fifidianana T & T tamin'ny 10 aogositrath. Nanamafy i Ramharack fa ny fisian'ny mpanara-maso dia hanampy fahalalahana sy fahatokisana amin'ny fifidianana mba hahazoana antoka fa demokratika kokoa izy io.
TENIN'NY MODERATOR DR KUMAR MAHABIR: Nanapa-kevitra ny mpitsara Dean Armorer fa tsy ara-dalàna ny fanapaha-kevitry ny EBC tamin'ny 6 hariva tamin'ny fifidianana tamin'ny 2015. Na izany aza, na i Ramatoa Fern Narcis-Scope, izay mpanolotsaina ambony momba ny lalàna an'ny EBC na ireo tompon'andraikitra amin'ny raharaham-panjakana EBC, dia samy voampanga ho nandika ny lalàna na fitondran-tena ratsy teo amin'ny biraom-panjakana, na nampiato na noroahina tsy ho ao amin'ny EBC. Narcis-Scope no hitarika ny 10 aogositra ho avy izaoth Fifidianana 2020, amin'ity indray mitoraka ity amin'ny maha Chief Chief Officer Officer (CEO).
Ny fivoriana ampahibemaso ZOOM dia notontosain'i avaline.mq
Dr. Kumar Mahabir, mpandrindra sy mpandamina
Vaovao Diaspora Indo-Karaiba (ICDN)
Trinidad sy Tobago, Karaiba
Nevada dia manana Road To Recovery avy amin'ny COVID-19
Newark mankany Munich - indray izao ao amin'ny United Airlines